#Waxaa Wax Walba beddelay oo Caqabad ku noqday Soomaali-land Imaanshihi Abiy iyo Soo Dhaweysashadiisa Eritrea | Get Latest News From Horn of Africa |
#Waxaa Wax Walba beddelay oo Caqabad ku noqday Soomaali-land Imaanshihi Abiy iyo Soo Dhaweysashadiisa Eritrea
Shirkadda Imaaraadka Carabta ee DP World ayaa wax ka beddeshay qorshaheedii dekedda Berbera, waxaana ay hoos u dhigtay muhiimaddii dekeddaas, Sida ay africa intelligence bahisay bishii november ee aynu soo dhaafney.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in DP World aysan dooneyn inay maal-gelin buuxda ku sameyso dekedda Berbera, sida qorshuhu ahaa.
Sida africa intelligence ka helnay, kulan uu guddoomiyaha DP World Sultan Ahmed Bin Sulayman la yeeshay, madaxweynaha Soomaali-land Muuse Biixi Cabdi, waxa uu u gudbiyey dhowr arrimood oo walaac uu ka qabo.
Sultan Ahmed ayaa Muuse Biixi u sheegay in DP World ay mar kasta ay ku qasban tahay in ay raacdo rabitaanka dowladda Ethiopia, maadaama Ethiopia ay tahay taan kaliya ee la qorsheeyey in dekedda isticmaali doonto, islamarkaana DP World ay sidoo kale maamuleyso dekedda Assab ee Eritrea.
Tani waxa uu macnaheedu yahay haddii Ethiopia ay doorbideyso dekedda Assab, sababo siyaasadeed dartood, waxa ay DP World ku qasban tahay inay xoogga saarto dekedda Assab, taasi oo saameyn ku yeelan doonta horumarintii la qorsheeyey in DP World ay ku sameyso dekedda Berbera.
Markii heshiiska Bebera ay galeen Soomaali-land iyo DP World, Eritrea waxay ku jirtay go’doon siyaasadeed, waxaana Ethiopia maamulayey Hailemariam Desalegn.
Isbeddelkii deg degga ahaa ee dhacay iyo imaatinkii Abiy Ahmed, oo xoogga saaray inuu soo dhoweysto Eritrea, ayaa wax walba beddelay, caqabadna ku noqday Soomaal-iland.
Waxaa durba jira astaamo muujinaya in Ethiopia doorbideyso dekedda Assab. Dhawaan Xukumadda Addis-Ababa waxay ku gacan seertay codsi ka yimid Hargeysa oo ku saabsanaa in la dhiso dhuun gaas ah oo shidaalka kasoo qaadda dhulka Soomaalida ama Killinka Shanaad, marka shidaalka laga soo saaro, lagana dhoofiyo dekedda Berbera.
Wararka ayaa sheegaya in Ethiopia ay doorbideyso dekedaha Assab ama Jabuuti midkood, dhuunta shidaalkana dhinacaas la mariyo.
Dhinaca kale, isaga oo amar ka helaya ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, ayaa wasiirka arrimaha dibedda Ethiopia Workeneh Gebeyahu waxaa la sheegay inuu hor-istaagay in wafti ka socda Ethiopia ay ka qeyb galaan xafladdii furitaanka dekedda Berbera ee dhacday 11-kii October 2018.
Xogta Saxafadda Ay heleyso ayaa sidoo kale sheegeysa in tan iyo markii uu yimid xafiiska, uu Abiy Ahmed diiday dhowr codsi oo uu Muuse Biixi doonayey inuu kula kulmo.
Muuse Biixi ayaa la sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibedda iyo wakiilka Soomaali-land ee Imaaraadka labada ka codsaday in la tashtaan Axmed Cusmaan oo ah dhaqaalyahan reer Soomaaliland ah oo ka shaqeeya Bankiga Adduunka, si loo eego waxa u furan oo ay Soomaali-land sameyn karto.
Si kastaba ha Ahaate, Muuse Biixi ayaanay u furneyn albaabo badan oo uu go’aan ku qaadan karo, maadaama Imaaraadka uu bishii siiyo 4 milyan oo dollar oo miisaaniyaddiisa uu ku kabto, islamarkaana ay 7 milyan ku bixiyeen ololihiisa doorashada.
Xaaladda ayaa la sheegay inay kor kala socoto Xukumadda Muqdisho, oo ay qosol meel la fadhido in kasto aysan wali ka hadal xaladda murugsan ee ay madaxda sar srae ee hargeysa markaste ku celiyaan ee ah in xukumadda muqdisho ay albaabadii ka soo xirxirtey.